ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် မြန်မာအစိုးရ နိုဘယ်ဆု ရနိုင်တယ်လို့ ဖင်လန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းပြော
"အမှန်အတိုင်း ပြောပြလို့ရမလားဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်........ရဲ နဲ့ပတ်သတ်ပြိးတော့ရော ပြိးတော့ တရာသူကြီးတွေ ရော ပါနေလို့... ပို့လို့ဖြစ်မလားဆိုတာကို အရင်သိချင်ပါတယ်...."
genius နေရပ်- YANGON :
ဘု၇ား ၊ ဘု၇ား ...... တလွဲ တွေ မလုပ်လိုက်ပါနဲ. ၊
ဒီလောက် ကလိမ်ကကျစ် ကျပြီး ယုတ်မာတဲ.
ပြေဟိန်း နေရပ်- Copenhagen :
မိုးသီး နေရပ်- mdy96 :
ကြိုဆိုပါတယ် ။ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရယူနိုင်ပါစေ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အောက်ခြေ
tin aung နေရပ်- Kotka :
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြန်မာအစိုးရဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ရရှိနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် Martti Ahtisaari က သောကြာနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ mistake ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဖင်လန်သမ္မတဟောင်း တယောက်ဖြစ်တဲ့ Martti Ahtisaari
nathan နေရပ်- tri-cities :